Ihe eji achoputa ndi akuko na ndi nta akuko
Agility PR Ngwọta - Otu ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ PR tụkwasịrị obi na ngwaahịa na ọrụ gafee ụwa.
Bitesize PR - Anyị na-eme ka ọ dị mfe maka obere azụmaahịa ịchọta ma zaghachi nnukwu ohere mgbasa ozi.
Gorkana - ọgụgụ isi mgbasa ozi kachasị bụrụ nke ziri ezi na UK.
Nyere Onye Na-ede akụkọ Aka - Site na New York Times, gaa ABC News, na HuffingtonPost.com na onye ọ bụla nọ n’etiti, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ 30,000 nke ndị mgbasa ozi ekwuola HARO isi mmalite nke akụkọ ha. Onye ọ bụla bụ ọkachamara na ihe. Kekọrịta nka gị nwere ike ịdọnye gị nnukwu ohere mgbasa ozi ị na-achọ.
Ndi oru nta akuko - Chọta ndị nta akụkọ ma hụ ihe ha na-ede banyere ya.
Mgbasaozi Media bụ ọrụ akwụ ụgwọ ($ 89.95 kwa ọnwa) maka ndị ọkachamara azụmaahịa ka ha na-ekwukọrịta ma soro ndị nta akụkọ nwee njikọ site na ntinye ngwa ngwa ma dịkwa mfe. Ndị nta akụkọ 9,704 na PR na-arụ ọrụ kemgbe 2001.
MediaOnTwitter - Zụlite mkpakọrịta na ndị nta akụkọ, ndị edemede yana ndị mgbasa ozi ndị ọzọ site na Twitter. Soro ha na ha ruo ụbọchị maka mmelite na ụlọ ọrụ mechara. Akụ abụọ nwere nnukwu akụkọ na ndị mgbasa ozi na Twitter Media na Twitter.
The Meltwater Pịa mgbasa ozi mmekọrịta software-dị ka-a ọrụ na-enyere gị aka iwulitekwu ndepụta mgbasa ozi ezubere iche, na-eji naanị isiokwu ndị odeakụkọ dabeere na isiokwu na ụlọ ọrụ ahụ. Choo ndi odeakụkọ dabara na akụkọ gị dabere na ihe ha dere n'oge gara aga, wee kesaa ozi gị site na email ma ọ bụ site na waya site na otu ikpo okwu. Ngosi: Meltwater bụ onye nkwado nke Martech Zone
Uche mkpọchi (ọrụ akwụ ụgwọ na-ebido na $ 199 kwa ọnwa) na-eduga ngagharị iji kwụsị spam spam site n'itinye ndị odeakụkọ na njikwa igbe ha. Na Muck Rack ọ dị mfe ịchọta ezigbo onye nta akụkọ, hụ ihe ha na-eme na anaghị ekpuchi, wee zigara ha ọkwa ha ga-achọ ịhụ.
Akwụkwọ ikike na-enye usoro mgbasa ozi ụwa na nchekwa data a na-enyocha nke nkwenye, ndị ọkachamara gbara ajụjụ ọnụ na echiche akụkọ nwere ike ịnweta 24/7.
Ndetu ndetu emepụtara iji nye PR pros ohere iji nyochaa ma kwuo maka ahụmịhe nke onwe ha na ndị odeakụkọ ụfọdụ.
ProfNet - Achọ akwụ ụgwọ ọnyịnye mgbasa ozi? Ndị nta akụkọ na ndị na-ede blọgụ na-ezigara ọtụtụ puku akụkọ na kwa ọnwa na ndị ọrụ ProfNet. Ndi ndi mgbasa ozi abiara gi na ProfNet.
Njikọ Onye nta akụkọ bụ nke m sonyeere n'oge na-adịbeghị anya, mana enwere m mmasị na usoro nke ozi ịntanetị ha na sistemụ ha maka ịzaghachi - dị elu karịa HARO.
Isi mmalite - UK Ndi ana-akpo Media Ndi ana-acho - choo ma choputa nkesa ndi edeturu na ohere PR.
Kalama - Anyị na-enyere ndị nta akụkọ na ndị na-ede blọgụ aka ịchọta isi mmalite. Anyị na-enyere azụmaahịa na PR uru inweta mgbasa ozi n'efu.
Tags: agile pragilepraru aru prbulldog onye nta akụkọchọta ndi oru nta akukochọta ndị nta akụkọonyekwereharonyere onye nta akụkọ akachukwunyerenta akụkọ ndepụtandi oru nta akukomgbasa ozi na twittermgbasa ozi promgbasaozigbazee mmiriugwurugwuozi ọma gbaarapitchnkọwa ndetuPR NewswireObinnanjikọ nta akụkọndepụta nta akụkọakukochọọ ndị na-ede blọgụchọọ ndị nta akụkọchọọ ndị nta akụkọisi iyiisi
Aug 14, 2015 na 8: 50 AM
Daalụ maka ndepụta akụ, Karr! You ma ọrụ ọ bụla na mba ndị ọzọ? Ọmụmaatụ, na Russia bụ ewu ewu pressfeed.ru. Kedu ihe kachasị ewu ewu na UK?